Fiaraha-monina vaovao (Asa. 2:42-47)
Catégorie : Lesona 9: Ny asa fanompoana teo amin'ny fiangonan'ny testamenta vaovao
Nitombo haingana ireo vondron'ny mpino taorian'ny niakaran'i Jesôsy tany an-danitra sy ny firotsahan'ny Fanahy Masina tamin'ny Pentekôsta, ka nanangana ny fiangonana voalohany, karazana fiarahamonina vaovao teo amin'ireo mpanara-dia an'i Jesôsy, notarihin'ireo mpianatra voalohany. Tsy noforoniny teo amin'izy samy izy anefa izany fiarahamonina izany, fa niorina teo amin'ny fampianarana sy ny asan'i Jesôsy ary nosintonina avy amin'ny tantaran'ny Soratra Masina hebreo sy ny mpaminaniny.
Vakio ny amin'ny fiangonan'ny TV ao amin'ny Asa. 2:42-47 sy ny Asa. 4:32-37. Inona no asa lehibe nataon'ny fiangonana?
Tsy niaina araka ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainany ireo Isiraelita tamin'ny andron'ny TT. Tian'Andriamanitra ny hanaovan'ny Isiraely izay marina sy mahitsy. Tsy mitovy amin'izy ireo anefa ny fiangonan'ny TV izay nanaraka tsara izay voalazan'ny Deo. 15:4: "kanefa tsy dia hisy olo-malahelo eo aminao". Inona no nataon'ny Kristianina mba hanehoana ny finoany? Nivarotra izay nananany izy ireo, eny hatramin'ny taniny aza, ary nampiasainy hanampiana ny mpino mahantra ny vola amin'izany. Nanampy ny marary izay nila fanasitranana tao amin'ny fiarahamonina koa ny fiangonan'ny TV (vakio ny Asa. 3:1-11;Asa. 5:12-16)
Tsy tonga lafatra ny fiangonan'ny TV, nihanitombo niaraka tamin'ny fiangonana ny olana. Mikasika ny sakafo nomena ny mpitondratena isan'andro ny iray amin'izany olana izany (vakio ny Asa. 6:1). Naniry ny hitory ny filazantsara momba an'i Jesôsy ireo mpitarika ny fiangonana. Ahoana no namahany ny olana? Nifidy lehilahy fito izy ireo hiandraikitra ny fanomezana sakafo ho an'ny mpitondratena. Nifidy ireo lehilahy fito ireo ny fiangonana mba handray an-tanana ny raharahan'ny fiangonana amin'ny andavanandro. Nanomboka nametraka olona samy hafa hiandraikitra ireo ampahany samy hafa amin'ny asan'Andriamanitra ny fiangonana. Tafiditra tao anatin'ny raharahan'ny fiangonana isan'andro ny fikarakarana ny mpitondratena sy ny fanasitranana ny marary. Tsapan'ny fiangonana fa zava-dehibe ny mijoro ho vavolombelona amin'ny hafa amin'ny alalan'ny fanampiana azy ireo.
Alaivo sary an-tsaina ny fiainana tamin'ny andron'ny fiangonan'ny TV. Ahoana no nanehoan'ireo Kristianina tamin'izany fa miahy ny hafa izy ireo? Inona no azontsika atao, amin'ny maha-fiangonana antsika, mba hanehoana fa mihevitra ny hafa koa isika?